Nahoana no Tsy Nifady Hanina ny Mpianatr’i Jesosy? | Fiainan’i Jesosy
MATIO 9:14-17 MARKA 2:18-22 LIOKA 5:33-39
NANONTANY AN’I JESOSY MOMBA NY FIFADIAN-KANINA NY MPIANATR’I JAONA
Nigadra i Jaona Mpanao Batisa taoriana kelin’ny nankalazan’i Jesosy ny Paska taona 30. Tiany ho lasa mpanara-dia an’i Jesosy ny mpianany. Tsy izy rehetra anefa no nanao izany.
Efa akaiky ny Paska taona 31 tamin’izay. Nisy mpianatr’i Jaona nanontany an’i Jesosy hoe: “Nahoana izahay sy ny Fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady?” (Matio 9:14) Fombafomba ara-pivavahana ny fifadian-kanina nataon’ny Fariseo. Nivavaka toy izao ny Fariseo nihevi-tena ho marina tao amin’ny fanoharan’i Jesosy: ‘Andriamanitra ô, misaotra anao aho fa tsy mba toy ny olon-kafa rehetra. Mifady hanina indroa isan-kerinandro aho.’ (Lioka 18:11, 12) Nety ho nifady hanina ny mpianatr’i Jaona satria nanao fombafomba, na nalahelo an’i Jaona nigadra. Gaga izy ireo hoe tsy nifady hanina ny mpianatr’i Jesosy. Noheveriny fa tokony hampiseho ny alahelony an’i Jaona toy ny hafa angamba izy ireo.
Nilaza an’izao ohatra izao àry i Jesosy: “Misy antony tokony hampalahelo ny naman’ny mpampakatra ve, raha mbola eo aminy ny mpampakatra? Ho avy anefa ny andro hanesorana ny mpampakatra tsy ho eo aminy, ka amin’izany andro izany izy ireo vao hifady hanina.”—Matio 9:15.
Noharin’i Jaona tamin’ny mpampakatra i Jesosy. (Jaona 3:28, 29) Tsy nifady hanina àry ny mpianatr’i Jesosy raha mbola teo i Jesosy. Halahelo sy tsy te hihinan-kanina kosa izy ireo rehefa maty izy. Hiova anefa izany rehefa hatsangana amin’ny maty izy. Tsy halahelo intsony izy ireo ka tsy hila hifady hanina.
Nilaza fanoharana roa i Jesosy avy eo. Hoy izy: “Tsy misy manampina akanjo tonta amin’ny tapa-damba vaovao. Hisintona be mantsy ilay tapa-damba, ka handrirotra an’ilay akanjo ary vao mainka hitatra ny rovitra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra efa tonta. Raha izany mantsy, dia ho vaky ilay siny hoditra ka ho raraka ny divay ary ho simba ny siny. Fa atao ao anaty siny hoditra vaovao ny divay vaovao.” (Matio 9:16, 17) Inona no tiany hambara?
Tian’i Jesosy haseho an’ireo mpianatr’i Jaona fa tsy tokony hisy hanantena hoe hanaraka ny fanaon’ny Fivavahana Jiosy, toy ny fifadian-kanina, ny mpanara-dia azy. Tsy tonga hanatsara na hanohy an’io fivavahana io izy. Efa lany andro mantsy izy io sady efa hialana. Hafa mihitsy ny fivavahana nasainy narahina, fa tsy toy ny Fivavahana Jiosy izay nanantitrantitra fampianaran’olombelona. Tsy nanampina akanjo tonta tamin’ny tapa-damba vaovao izy, na nanisy divay vaovao tao anaty siny hoditra efa tonta sy henjana be.
FANOHARANA MIFANDRAY AMIN’NY FIFADIAN-KANINA
Nampiasa fanoharana momba ny fanjairana i Jesosy. Mora azon’ny olona maro izany. Ahoana raha misy manampina akanjo na lamba tonta amin’ny tapa-damba vaovao? Rehefa sasana ilay akanjo, dia hisintona ilay tapa-damba vaovao ka handrirotra an’ilay akanjo ary handrovitra azy amin’ny farany.
Natao tao anaty siny vita tamin’ny hodi-biby koa ny divay indraindray. Tsy nalefaka intsony ilay hoditra rehefa elaela. Tsy mety ny manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra toy izany satria mety mbola hiova sy hamoaka alkaola ny divay vaovao, ka hirirotra ilay siny hoditra efa mafy ary ho triatra.
Iza no nifady hanina tamin’ny andron’i Jesosy, ary nahoana?
Nahoana no tsy nifady hanina ny mpianatr’i Jesosy tamin’izy mbola teo, ary inona no mety hahatonga azy ireo hifady hanina any aoriana?
Inona no dikan’ny fanoharan’i Jesosy momba ny tapa-damba vaovao sy divay vaovao?
Hizara Hizara Nahoana no Tsy Nifady Hanina ny Mpianatr’i Jesosy?